कहिले आउँछ एसईईको नतिजा ? – Sanchar Patrika
कहिले आउँछ एसईईको नतिजा ?
परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले अहिलेसम्म करिब ४५ जिल्लाबाट प्राप्ताङ्क आइपुगेको जानकारी दिए । जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले प्राप्ताङ्क पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाढीपहिरोका कारण कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाबाट नम्बरसहितको काजगात आएको छैन । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
Prevक’मजोर मानिसले ब’दला लिन्छ, बलियो मानिसले माफी दिन्छ, बुद्धिमान मानिसले भुलिदिन्छ । – अल्बर्ट आइन्स्टाइन
Nextभारतीय चर्चित मिडियाले गर्यो नेपाली नायिकाको चर्चा, तर शेयर गर्यो उल्टो तस्बिर
सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह ! [जानकारीको लागि शेयर गरौँ]